कोरोना भाइरस : माछा मासु खानु कत्तिको जोखिम छ ? - Experience Best News from Nepal
देश लकडाउनको अवस्था छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलनबाट रोक्न सरकारले एक हप्ताको लागि लकडाउन गरेको छ । यहि लकडाउनको अवस्थामा धेरै मानिसहरुमा विभिन्न जिज्ञासाहरु उब्जिरहेको पाइन्छ । माछा मासु खाने कि नखाने भन्ने विषय पनि अहिले बहस बनेको छ । माछा मासुबाट कोरोनाभाइरस सर्ने तर्कले गर्दा अहिले माछा मासुको सेवन कम भएको पाइएको छ ।
बीबीसीमा प्रकाशित एक लेखमा एपोलो अस्पतालका डाक्टर लक्ष्मण देसाईका अनुसार माछा मासु मात्र होइन तरकारीहरु समेत सुरक्षित छैन, यदि राम्रोसँग पकाएन भने ।
डा. देसाईले भनेका छन्, “कोरोनाभाइरसलाई जीवित रहन माध्यम चाहिन्छ र त्यो खाने कुरामा रहन सक्दैन । कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा नजिकिंदा सर्ने गर्छ । तर माछा मासु किन्दा पन्जा लाउने र मास्क लाउनु जरुरी हुन्छ र मासुलाई कम्तिमा ३० मिनेट पकाउन चाहि पर्छ जसले गर्दा मासुमा भएका किटाणु मर्छन् ।”
मासुबाट भाइरस सरेको अहिलेसम्म पुष्टि नभएको कारण मासु खाँदा जाेखिम हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो भन्ने तर्क बीबीसीले प्रस्तुत गरेको छ । मासुसँगै तरकारीहरु समेत राम्रोसँग पखाल्नेदेखि राम्रोसँग पकाएर खान समेत उल्लेख गरिएको छ ।
केराको बोक्राको फाइदै फाइदा
गाजर नियमित खाँदा फाइदैफाइदा
ओखर भिजाएर दिनदिनै खानुस्, यस्ता हुनेछन् फाइदा